kulan Lagaga Hadlayay Dar dargalinta hawlaha Horumarka oo ka dhacay galxamur. - Cakaara News
kulan Lagaga Hadlayay Dar dargalinta hawlaha Horumarka oo ka dhacay galxamur.
Galxamur(cakaaranews) talaado, 26ka July, 2016 Wafti uu hogaaminayo gudoomiyaha Gobolka Doollo mudane Maxamuud Cali Axmed, masuuliyiin heer gobol, heer degmo iyo qaarka mid ah saraakiisha ciidanka booliska gaarka ah ayaa maanta kormeer howleed ku tagey degmada cusub ee galxamur ee gobollka Doollo.
Waftigan ayaa kulan balaadhan la yeeshay bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan degmada galxamur. Kulankaasi ayaa waxaa lagaga wada hadlay sidii loo sii dar dargalin lahaa hawlaha horumarka nabadgalyada iyo maamulka suuban.
Gudoomiyaha Gobolka Doolo mudane Maxamuud cali axmed ayaa sharax dheer ka bixiyay doorka ay qaybaha kala duwan ee bulshadu ku leeyihiin hirgalinta hawlaha horumarka nabadgalyada maamul wanaaga. Wuxuuna ka warbixiyay jihooyinka iyo istaraatajiyadaha horumarineed ee u dajisan xukuumada DDSI iyo tabaha lagu fulinayo.
Dhankooda qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada galxamur ayaa sheegay in ay ku faraxsan yihiin dadaalada balaadhan ee ay xukuumada DDSI ku hirgalisay horumarka xawliga ah waxayna sheegeen in ay dhankooda ka soo baxayaan doorka ay ku leeyihiin hirgalinta hawlaha horumarka nabadgalayda iyo maamulka suuban.